'राजसंस्था फर्के राम्रो' - नेपाल समय
'राजसंस्था फर्के राम्रो'
पशुपतिशमशेर राणासँग पञ्चायतकाल र बहुदलकालको शासन अनुभव छ। उनी पञ्चायतकालदेखि नै सरकारमा रहँदै आए। राणा अहिले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्व गरेको राप्रपासँग पार्टी एकीकरण गरेपछि राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष छन् । नाति जर्नेल उपनामले चिनिने राणासँग धेरै लामो र भूमिका बाँधेर बोल्ने बानी छैन। उनी एक शब्दमा उत्तर दिन्छन् । पार्टी विभाजन, सरकारको कार्यशैलीलगायतका विषयमा नेपाल समयले राणासँग गरेको कुराकानी-
राप्रपा फुट्ने र जुट्ने क्रममा छ, अहिले एकताका लागि केही काम अगाडि बढेको छ कि ?
एक चरण त एकता भइसक्यो। चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। राष्ट्रवादी र हामी त मिलिसक्यौं । केही मानिस थप्न बाँकी छ। त्यस पछि अरूसँग पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
राप्रपासँग तपाईंहरूको एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ?
अहिले नै अगाडि बढेको छ भन्न मिलेन। तर चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छ।
राप्रपाको पटकपटक विभाजन हुने गरेको छ। यो के मुद्दामा विभाजन हुन्छ?
पछिल्लो समय कमल थापासँग कुरा चलेको हो। तर हाम्रो कार्यसम्पादन समितिले उनीहरुसँग एकता गर्न मानेन।
नमान्नुको कारणचाहिँ के हो?
विभिन्न कारण आए। तर कार्यसम्पादन समितिमा भारी बहुमतले एकता नगर्ने भन्ने कुरा ल्याए।
एकताको आन्तिममा आएर तपाईंहरूबाट भाँडिने गरेको आरोप छ नि ?
कार्यसम्पादनले गरेको निर्णय त मान्नैपर्‍यो नि । अन्तिम र सुरु समय भन्ने भएन। पार्टीको भारी बहुमतले एकता गर्ने कुरा चित्त नबुझाएपछि मैले केही गर्ने कुरा भएन ।
राप्रपा विभाजन र एकता हुन नदिने कुरामा विदेशी चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
केको विदेशी चलखेल ? त्यो मलाई थाहा भएन।
यसअघि नै तपाईं, कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बसेर अवधारणापत्र तयार गर्नुभएको थियो । डा. लोहनीसँग एकता गर्दा त्यही अवधारणापत्रका आधारमा गर्नुभयो रे । तर राप्रपालाई किन छाड्नुभएको ?
त्यस्तो होइन। कमल थापाजीसँग र डा. प्रकाशचन्द्रसँग पनि कुरा भएको हो। थापाजीसँगको कुरा सफल भएन, लोहनीसँगको वार्ता सफल भयो।
राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादीबीच एकता हुँदा तपाईंहरूले हस्ताक्षर गरेको अवधारणापत्र आए तुरुन्तै आफूले सही गर्ने चुनौती दिएका छन् नि ?
ठिकै छ नि । उहाँं सही गर्न तयार हुनुहुन्छ भने त्यो मौका मिल्ला । हामी एकताको चरण सक्छाैं । त्यसपछि हामी उहाँंहरुसँग छलफल अगाडि बढाउँछौं।
भनेपछि त्यसमा कमल थापालाई सही गराउनुहुन्छ?
कुनै किसिमले त्यो बाटोमा लाग्नुपर्ला ।
हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका विषयमा तपाईंको पार्टीको धारणाचाहिँ के हो?
राप्रपा संयुक्तले संघीयताका विषयमा अहिलेको संविधान स्वीकारेको छ । हामीले पहिलादेखि नै हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छाैं। हिन्दु अस्तित्वका रुपमा मुलुकको पहिचान हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। राजासहित अट्ने र सबैलाई स्वीकार्य हुने प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
तपाईंहरु पनि राजासहितको सबै शक्तिबीच गोलमेच सम्मेलनमा जाने हो?
गोलेमचभन्दा पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने साझा संस्थाका रुपमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र हो।
तपाईंले भनेजस्तो प्रजातन्त्र ल्याउने माध्यमचाहिँ के हुन सक्ला?
कुनै किसिमले जनताले स्वीकार्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
राजसंस्था पुनस्र्थापनाको सम्भावना छ?
राजसंस्था पुनर्बहाली भए असाध्यै उत्तम हुन्छ।
हिन्दु राष्ट्रको कुरा पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसभित्र पनि चलेको छ । कांग्रेससँग तपाईहरूको सहकार्य हुन्छ?
यस विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेससँग कुराकानी गरेका छैनौं । पहिला हामी यो कुरा आफैं अगाडि सार्छौं। अनि अरूको पनि समर्थन लिन सक्छांै कि भनेर हेर्छौं। यसमा मधेसी दल र कांग्रेसलाई पनि साथ लिन सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल गर्छौं।
हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका विषयमा तपाईंको पूर्वराजासँग पनि भेटघाट त चल्छ होला नि ?
हालसालै त मेरो भेट भएको छैन। तीन चार महिना पहिला भेट भएको थियो। हिन्दु राष्ट्रका विषयमा उहाँसँग कुराकानी भएको थियो।
तपाईंसँग लामो समय सरकार सञ्चालनको अनुभव छ, पहिलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच के अन्तर पाउनुभएको छ?
उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा नाकाबन्दीको विरोध रह्यो। त्यो नारामा उहाले भारी बहुमत ल्याउनुभयो। राजनीतिक तवरबाट उहाँले उपलब्धि हासिल गर्नुभएको हो। नेकपालाई एक बनाएर पार्टीको बहुमत ल्याउन उहाँले राजनीतिक कौशल देखाएको हो । तर अहिलेको एक वर्षको कार्यकालको अवधिको मूल्यांकन गर्दा उहाँबाट खासै केही काम भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले खासै केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभए जस्तो लाग्दैन।
प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनाको कारण के होला ?
उहाँ प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो पछि धेरै काण्ड भए। वाइडबडी काण्डमा ठूलो घोटला भयो। त्यसैगरी बूढीगण्डकीमा बिना टेन्डर ठेक्का दिइयो। तीन तहको सरकारमा नेकपाको बहुमत छ। तीनै तहमा नेकपाले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गरिदिएको छ।
निर्मला हत्यकाण्डबारे सरकार असफल भएको छ। मेडिकल कलेजका विषयमा सरकार माफियासँग मिलेको प्रस्ट देखिन्छ। गोविन्द केसीको विषयमा सरकार निष्ठुरी र विवेकहीन ढंगले काम गरेको देखिन्छ। हासिल भएको उपलब्धि के छ भनेर हेर्‍यो भने केही देखिँदैन।
सरकारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाचाहिँ कस्तो लाग्छ?
सरकारले जनताले भारी मतले दिएको दुई तिहाइ खेर फाल्यो। त्यो खेर फाल्दा नेपाली कांग्रेसलाई आलोचना गर्ने जुन मौका थियो त्यो खेर फाल्यो।
घोटाला र भ्रष्टाचारमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच मिलेमतोको आशंकासमेत उठ्ने गरेको छ नि ?
यो विषय मलाई जानकारी भएन। म यति मात्र भन्छु प्रमुख प्रतिपक्ष जुन ढंगले खरो गरी आलोचनामा उत्रनुपथ्र्यो त्यो सकेन। प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।
यस बेला सबैले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका कुरा गर्छन् तर त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन किन होला ?
केपी ओलीलाई असाध्यै मौका आएको हो। त्यो मौका उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसको मुख्य दोष ओलीलाई नै जान्छ। सरकारले कुनै काम गर्न सकेन भने त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री नै हो।
बुबा सम्झिनेको गोकर्णेश्वर मेला (फोटो फिचर)